बारनाबास खै ? : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
बारनाबास खै ?
[0] March 1, 2018	| Bhuvan Devkota
भर्खरै विश्वास गरेर हुर्कंदैगरेका पावललाई कसैले नपत्याएर प्रभुबाट गलहत्तिने स्थितिमा बारनाबारसले भेटेर प्रेरितहरूकहाँ लैजान्छन् । बारनाबासले नभेटेका भए सायद उनको जीवन यति प्रभावकारी हुनेथिएन होला कि ? तिनै पावल पछि नयाँ करारको मण्डलीका लागि ठूलो प्रेरणास्रोत बने किनभने उनलाई परमेश्वरले विशेष किसिमले प्रयोग गर्नुभयो । तिनै पावलले नै मण्डलीका लागि आवश्यक सबै कुरा समेटेर विभिन्न पत्रहरू लेखे, मण्डलीलाई येशू र उहाँको ज्ञानमा बलियो पारे । आफूलाई तल पारेर अरूलाई उठाउने बारनाबासको कस्तो उदेकको प्रेरणादायी चरित्र ।
प्रेरितको पुस्तकमा बारनाबासको प्रवेश नै निकै चाखलाग्दो छ । आफ्नो जमिन बेचेर उनले मण्डलीलाई पैसा दिएको कारणले अरूले उत्साह पाएको कुरा पनि निकै विचारणीय छ । उनको नाम उत्साहको पुत्र भएझैं उनको काम पक्का उत्साह दिने खालको छ । मण्डलीमा तिनैको नाम राख्ने मानिसहरू प्रशस्तै छन् तर उनको चरित्र बोकेका मानिसहरू कता छन् त ? मण्डलीमा साँच्चै बारनाबासहरू भइदिएका भए आज धेरै युवाहरूले वा सम्भावना बोकेकाहरूले सुसमाचार र प्रभुको कामलाई निकै माथि पुर्याउँथे । कष्टमा परेका धेरै मानिसहरू येशूको प्रेममा गदगद हुन्थे ।
आज मण्डलीमा प्रभुलाई सेवा गर्न चाहने धेरै मानिसहरू छन् । धेरै मानिसहरू विभिन्न किसिमले हतोत्साही भएका छन् । मानिसहरूलाई धेरै पटक अरूको उत्साहको आवश्यकता हुन्छ । तर मण्डलीमा यस्ता बारनाबासहरू खै त, कहाँ छन् ? येशूले आफ्नो मण्डली निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता भएका धेरै मानिसहरूलाई अघि बढाउने मानिसहरू कता छन् ?
के निगालाहरू पानीबिना लहलह बढ्न सक्छन् ? (अय्यूब ८:११)
सुसमाचार तथा इष्टर महोत्सव २०७४ मा हार्दिक निमन्त्रणा छ »